Tàu hỏa leo núi Mường Hoa Sapa | Excitinghochiminhcity - Excitinghochiminhcity.Vn
Tàu hỏa leo núi Mường Hoa Sapa | Excitinghochiminhcity
Kuuya kuSapa, usakanganwa kusangana nechitima chekukwira gomo reMuong Hoa.
Iro taundi rine mhute reSapa, inzvimbo inoyevedza yeNorthwest tourist region. Iyi nzvimbo haina kungoita hunhu hwakanaka, asi kushanya kwekudyara kwakagadziridzwa zvakare nemhando dzakawanda dzezviitiko zviri kushandiswa. Pakati pazvo, kukwezva nhamba huru yevashanyi munguva pfupi yapfuura, zvinofanirwa kutaurwa kuti zvinoshamisa 6-maminetsi rwendo rwenzira. Muong Hoa gomo rinokwira chitima.
1 Sumo pfupi nezve Muong Hoa chitima chekukwira gomo
1.1 Chitima chekukwira gomo cheMuong Hoa chiri kupi?
1.2 Chii chakanakisa nezveMuong Hoa gomo chitima?
2 Matikiti echitima chekukwira gomo reMuong Hoa | Gadzirisa mitengo yematikiti yazvino
3 Chii chinonakidza nezvekukwira chitima chemugomo cheMuong Hoa? Chiitiko chine 1-0-2
3.1 Panoramic maonero eNorthwest makomo nemasango kubva kumusoro
3.2 Kunda migwagwa yakanaka kwazvo muMuong Hoa
3.3 Shanyira musha wokuruka wevanhu veH’mong
4 Ndeapi mahotera ekugara pedyo neMuong Hoa Mountain Climbing Train?
4.1 1 – DH Sapa Hotel 2 nyeredzi
Sumo pfupi nezve Muong Hoa chitima chekukwira gomo
Yakaiswa mukushanda kubva munaKurume 31, 2018. Sapa gomo chitima – Muong Hoa inopfupisa chinhambwe chekufamba kubva pakati peguta reSapa kuenda kuFanipan cable chiteshi chemotokari kusvika maminetsi matanhatu chete. Muridzi anovandudza nekuvaka mutsetse wechitima anotarisira kuti chigadzirwa chitsva ichi, kana chaiswa, chichabatsira indasitiri yekushanya muSapa kuve nechiitiko chitsva chinonakidza. Panguva imwecheteyo, inopa vashanyi maonero akajeka enzvimbo yakanaka yeMuong Hoa mupata kubva kumusoro.
Iyi ndeimwe yeakareba uye yazvino mitsetse yechitima yemakomo muVietnam.
Ratidza online Muong Hoa gomo rinokwira chitima ndeimwe yenzira dzakareba uye dzemazuva ano dzezvitima muVietnam nhasi. Ngoro dzose dziri mbiri dzakagadzirwa nekambani yakakurumbira yeSwitzerland Garaventa, yakagadzirwa nehurefu hwemamita makumi maviri imwe neimwe, hupamhi hwemamita matatu, uye hupamhi hwekufamba hwemamita mashanu pasekondi. Huremu hwese hwezvingoro zviviri zvinosvika matani makumi maviri neshanu ane huremu hwepamusoro hwe200 vanhu. Kunyanya, mukati memukati wakashongedzwa senge mota dzechitima dzeEurope dzechitima dzekare dzine mafeni ekare, magirazi egirazi akajeka kuti aone zviri pachena kunze, zvakavezwa zvakavezwa, goridhe rakapetwa simbi.
Chitima chekukwira gomo cheMuong Hoa chiri kupi?
Nzira yechitima iri mhiri kweMuong Hoa mupata, anenge 10km kubva pakati peguta reSapa nemugwagwa. Nekuti nzvimbo iri muSapa ine makomo zvakanyanya, kufamba pano kwakaoma nekuti inofanirwa kupfuura nemugwagwa unomonereka uzere nemakomo marefu nemagomba akadzika. Kuzvarwa kweiyo yakakwira chitima nzira haingoshandure yakachengeteka uye nekukurumidza nzira yekufamba, asi zvakare inounza chimiro chitsva cheMuong Hoa kubva kumusoro, iyo zvakare inonakidza kwazvo.
Nzira yechitima inoyambuka Muong Hoa mupata, anenge 10km kubva pakati peguta reSapa.
Line station Muong Hoa gomo rinokwira chitima iri munzvimbo yepamusoro yepakati peguta reSapa, padyo nehotera yeMGallery uye panogumira iFanipan cable car station area. Iyo purojekiti ine hurefu hunosvika 2km uye inongotora maminetsi matanhatu ekufamba nechitima pane rwendo rurefu rwemugwagwa unotora makumi akati wandei emaminetsi.
>> Ona zvimwe: Shanyira misha muSapa – Runako rwemakomo eNorthwest
Chii chakanakisa nezveMuong Hoa gomo chitima?
Rwendo rwekutsvaga denga reIndochina harina kumbobvira ranyanya kunaka kune vashanyi, kunyanya avo vanofarira kuwanikwa. Nokudaro, kuberekwa kwechitima chinokwira nemaminitsi 6 nenzira inoshamisa yakaunza vanhu pamusoro pemakomo marefu uye gomba rakadzika-dzika kuti vaswedere pedyo nedenga reIndochina, kurota kwevanhu vakawanda. Nzira yechitima yeMuong Hoa ndiko kuedza kusingaverengeki kwevanhu vakapira chinyararire, zvichiunza mhedzisiro kuti ive yakakurumbira indasitiri yekushanya yeSapa. Chiitiko chakambotaurwa nezvacho zvakanyanya mumakore achangopfuura uye chinokwezva vashanyi vazhinji kuenda kuSapa Paunouya panzvimbo ino, haudi kupotsa mukana wekuona.
Iyi nzira yechitima ichapfupisa nguva kusvika pamusoro peFanipan.
Gara munzvimbo yechitima chitima chakagadzirirwa kufanana neEuropean chitima mota. Kutarisa kune nzvimbo yekunze kune kapeti yakakura yesango rakakomberedzwa padivi pegomo sebhaisikopo rine classic angle. Kunyanya pakuvira kwezuva kana dova, chitima chinoita sechinounza vashanyi vanoyangarara pakati pemhute, pakutanga kutarisa musha uri pazasi unoratidzika sekunge wakarasika munyika yengano.
Dhizaini yenzvimbo yakakura uye yemazuva ano yekutakura.
Matikiti echitima chekukwira gomo reMuong Hoa | Gadzirisa mitengo yematikiti yazvino
Muong Hoa chitima nzira – Sapa town centre yakadyarwa uye inotungamirwa neSun World Fansipan Legend boka. Mushure memwedzi ye18 yekuvakwa, yakapedzwa nekushandiswa kubva munaKurume 31, 2018, chirongwa ichi chakaita chiratidzo chevanhu vari munzira yekusvika padenga reIndochina. Kuvapo kwenjanji yemakomo kunobatsirawo mukukwenenzvera anotungamira vashanyi, nzvimbo yekutandarira uye yekuwanikwa yakaoma muNorthwest dunhu kunyanya pamwe neVietnam zvakazara.
Mutengo wetiketi reMuong Hoa gomo rekukwira chitima:
Gadziridza ichangoburwa Muong Hoa gomo rechitima tikiti mutengo, kunyanya sezvinotevera:
Mutengo wetikiti revakuru: 200,000 VND (tiketi-mbiri)
Mutengo wetikiti remwana kubva pa1m kusvika 1m3: 150,000 VND (tiketi renzira mbiri)
Cherechedza: Vana vari pasi pe1m vanotsigirwa mahara uye vana vane hurefu hunodarika 1m3 vanochajwa semari yevakuru.
Tiketi yechitima yegomo.
Package combo tikiti mutengo:
Uye zvakare, vashanyi vanogona zvakare kuona iyo Sapa-Fasipan kuwanikwa combo package, iyo inosanganisira: tikiti Muong Hoa gomo rinokwira chitima uye tambo yemota ine Couponi imwe chete yekushandisa sevhisi paVan Sam restaurant, chete ne:
Vakuru combo: 850,000 VND, tora coupon imwe inokosha zana remazana VND
Vana combo: mazana matanhatu ezviuru VND, tora coupon imwe inokosha zviuru makumi mashanu VND
Kunze kwezvo, kuitira kukurudzira uye kukurudzira kushanya kwevanhu vari mudunhu reLao Cai, Sun World Fansipan Legend inovhurawo chirongwa chekusimudzira chemitengo yematikiti zvakanangana nevateereri, kunyanya sezvinotevera:
Combo yevaenzi vakuru: 650,000 VND, tora coupon imwe inokosha 100,000 VND
Combo yevaenzi vari vana: 400,000 VND, tora coupon imwe inokosha zviuru makumi mashanu VND
Chii chinonakidza nezvekukwira chitima chemugomo cheMuong Hoa? Chiitiko chine 1-0-2
Sezita rayo, Muong Hoa ane nzvimbo yakanaka sebindu reparadhiso reNorthwest makomo marefu. Rwendo rwechitima runomhanya mujinga megomo, ichipfuura nemumaaducts akasimba. Pfupikidza firimu pfupi remaminetsi matanhatu rinotarisa kunaka kunoshamisa kwenyika yemhute. Agere muchitima, munhu wose achakwanisa kuona nemaziso ake, kunzwa nenzeve dzavo maungira emakomo nemasango, kuyemura mifananidzo yakajeka panzvimbo pemashoko pakutsanangura kunaka kweMuong Hoa.
Panoramic maonero eNorthwest makomo nemasango kubva kumusoro
Kana zvisati zvaitika, vashanyi vaida kuyemura runako runotsvaira rweMuong Hoa, nzira yega yaive yekukwira nepakati pegomo. Ikozvino, nekuvandudzwa kwemasevhisi ekushanya, kana vachiuya kuSapa, vashanyi vanongoda kushandisa mari inosvika zviuru zana zveVND kune tikiti rekufamba rwendo rwekutsvaga bindu reparadhiso reMuong Hoa kubva kumusoro.
Nakidzwa nekuona kweNorthwest makomo kubva muchitima.
Akagara mungoro yechitima yakagadzirwa sechitima chezvitima muEurope, zvinhu zvose, misha, uye minda zvinooneka nepamahwindo maviri egirazi, zvichiita kuti vaoni vakundwe sokunge vakarasika munyika inoshamisa.
>> Reference: Kuzvikwanira parwendo ruzivo muKatsi Katsi Sa Pa musha Details 2020
Kunda migwagwa yakanaka kwazvo muMuong Hoa
Nzendo Muong Hoa gomo rinokwira chitima Kutanga kubva pakati peguta reSapa, uchipfuura nemumusha weKatsi Katsi, pekutanga kuona, kune minda yakakura yakakomberedzwa, kozoita matenga emakamuri matatu akapfava ane matenga emapuranga akaputirwa nemoss nekufamba kwenguva. Ichitevera ruvara rwegirinhi rwechitima, yakafamba zvishoma nezvishoma ichipoterera mujinga megomo, ichitarira pasi pamupata wakafukidzwa namakore machena namakore. Makomo, misha, uye minda inoramba ichitambanudzwa munzira yechitima ichipfuura, kusvika kumagumo muMuong Hoa semusikana munyoro uye akanaka wechirimo akamirira vashanyi.
Chitima chinokutora iwe kuburikidza nemigwagwa yakanaka kwazvo muMuong Hoa.
Muong Hoa haina kunaka chete munguva yekunaya kwemvura kana mupunga wakaibva, asi yakapusa seruvara rwehutsi rwebhuruu rwemaruwa, kana minda yakapenya iri pedyo nemakomo anomonereka, ichigadzira runako rwakaoma kutsanangura mumashoko.
Shanyira musha wokuruka wevanhu veH’mong
Imwe yenzvimbo dzinofanirwa-kuona muMuong Hoa dzinogara dzakamirira vashanyi panguva yerwendo musha wekuruka weH’mong. Nokuti pakuwana nyika, chinogara chichiita kuti vashanyi vade kuziva nezvetsika nemararamiro evanhu veko.
Shanyira musha wekuruka weH’Mong kuti unzwisise zvakawanda nezve tsika yedunhu rino.
Zvisikwa zvinofarira Muong Hoa zvekuti huswa hurefu munzira inoenda kumusha wekuruka weH’mong hunoyevedza gore rose. Pakutanga kuona chiitiko chemusha une matenga ari nyore emapuranga, vanhu vemarudzi vakapfeka mapatani ane mavara uye mavara vanoramba vachikwezva maziso evashanyi. Vana vasina mhosva vari mumakomo marefu vane vhudzi regoridhe rakatsvoda nezuva pazviso zvavo zvichena, zvine mutsindo nokuda kwemamiriro okunze anotonhora, vanopfuurira nenzira isina mhaka mumirangariro yavashanyi.
Pakati pemakomo akakura nemasango ekuchamhembe kwakadziva kumadokero paHoang Lien Son renji, runako rwepasi reparadhiso reMuong Hoa hakusi kure zvakanyanya kune vashanyi. Kana munhu akatsika mutaundi rine mhute reSapa, vashanyi havafanirwe kupotsa rwendo muchitima chegomo chinobatana nepakati peMuong Hoa.
Ndeapi mahotera ekugara pedyo neMuong Hoa Mountain Climbing Train?
Pazasi pane ruzivo nezve 2-nyeredzi chikamu hotera chandakasangana nacho uye chandinonyanya kufarira. Iyi hotera yakanaka kwazvo, pakati chaipo, yakanakira kufamba uye kudya pamwe nekufambisa kune zvinokwezva zvakaita seMuong Hoa Mountain Chitima. Chinonyanya kukosha ndechekuti mutengo wacho wakachipa zvakanyanya kana uchienzaniswa nemamwe mahotera asi mukati mune nyowani. Ngatitarisei pazasi !!!
1 – DH Sapa Hotel 2 nyeredzi
Iyi ndiyo hotera yangu yandinofarira, uye ndinokurudzira munhu wese kuti asarudze. Yakanaka, yakachipa, uye yakanaka kwazvo nzvimbo yekuti iwe nemhuri yako muve nekunakidzwa uye kunoreva rwendo kuenda kuSapa !!!
DH SAPA Hotera Yakavakwa uye inoshanda kubva 2019, 2 nyeredzi chiyero ine yakazara makamuri makumi maviri nemasere, akawanda akasiyana marudzi. Iri munzvimbo yakabatikana yevashanyi nzvimbo yeSapa uko kune zvine mukurumbira zvinokwezva. Kugara pano, iwe uchafamba zviri nyore, kudya uye kutora chikamu mumitambo inonakidza muSapa yakadai se: Love Market, Ham Rong Mountain, Stone Church, Cultural Market, Sapa Bus Station, Chitima Leo Muong Hoa Mountain. Kunyanya, iri pasi pe3km kubva kuDH Hotel kuenda kuFanipang Cable Car station. Saka zviri nyore, handizvo here…
Kero: 578 Dien Bien Phu Street, TT. Sapa, Lao Cai guta
Reservation hotline: 0977.034.218 ( contact Muridzi wehotera VaChuyen kuti uwane mutengo wakanakisisa.
Parizvino, DH Hotel iri kusimudzira kusvika ku40% kubva pamitengo yemakamuri sezvinotevera:
– MUTENGO WEKUMBERI HAUKUBANDISIRIRE KUSVIRWA KWAKO – GROUP 20 VAenzi VACHANGE VACHANGE MAHARA –
RUDZI RWEMUMBA MUTENGO WESVONDO WEEKEND PRICE
Kamuri ine mubhedha 1 1.8m (vaenzi 2) 350,000 VND Same
Kamuri ine 2 mibhedha 1.6m 1.2m (vaenzi 3) 350,000 VND Same
Kamuri ine 2 mibhedha ye1.6m mhando (vaenzi 4) 350,000 VND Same
Kamuri ine 3 mibhedha ye1.2m mhando (vaenzi 3) 400,000 VND Same
Makamuri epahotera yeDH Sa Pa akakamurwa kuita mhando dze03, dzinosanganisira: Kamuri imwe yemubhedha, kamuri ine mibhedha miviri, uye yemibhedha mitatu. Chakanakira ndechekuti kune makamuri gumi nematanhatu ane maviri 1.6m mibhedha (anogona kugara vanhu 4), akakodzera kwazvo kushanya mukugoverana kwekamuri, kuderedza mutengo wemitengo yekamuri.
Mufananidzo : DH SAPA 2 nyeredzi hotera: Yakanaka, yakachipa pakati chaipo peSAPA
-IMUDZIMBA DZESE INE ZVINHU ZVAKAZARA PASI:
Elevator, Wifi, Air conditioner, fan, chiedza chehusiku
Chimbuzi chakazvimirira, Tea nekofi kugadzira zvivakwa, Minibar
Cable TV system uye 32 muLCD ruvara TV.
Hair dryer, standard inoraswa…
Mitengo yemakamuri yakavakirwa pahuwandu hwemakamuri/husiku uye ari muVietnamese Dong
Check-in time: Kubva 14 pm, Check-out nguva: Pamberi 12 masikati (Partner vatengi vanogona kuchinjika muC. In uye C. kunze pasina muripo).
Gamuchira kubhadhara nemari, kadhi rechikwereti: Master kadhi, Visa kadhi (hapana basa rekubhadhara).
With Formula ( HOTELA YANGU – Imba YAKO) Naizvozvo, DH Hotel inogara yakazara nevashanyi, zvinoenderana nenhamba dze2019, DH iri mumahotera maviri epamusoro anotengeswa eSapa uye anogara akayerwa 5 nyeredzi nevatengi. Kurumidza fonera VaChien kuti vakuronge imba kana wafunga kuenda kuSapa.
Ndinoshuva iwe uine inoshamisa Muong Hoa gomo rekukwira chitima chiitiko
I – musikana ane tsoka dzinoda. Chishuwo changu ndechekudya zvandinoda uye kuenda kwandisati ndamboenda. Ini ndinoda kuti nzvimbo dzese dziri pachikamu chenyika chakaita S kuti dzitsikwe tsoka dzangu. Iwe une zvaunofarira zvakafanana neni here? Ngatifambei neni pano neapo, tinzwe zvinhu zvinonakidza zvehupenyu mushure merwendo rwega rwega!
← Top 8 các dòng iPad tốt nhất hiện nay của Apple năm 2021 | Excitinghochiminhcity
Không gian, menu, dịch vụ | Excitinghochiminhcity →